Hanti-dhawraha Somaliland oo bilaabay la dagaalanka musuqa maamulkiisa – Kalfadhi
Hanti-dhawraha Somaliland oo bilaabay la dagaalanka musuqa maamulkiisa
Hanti-dhawraha Guud ee Somaliland, Axmed Yuusuf Dirir, ayaa sheegay in ay baaritaan, la xiriira musuq-maasuq, ku hayaan laba hay’adood oo waa weyn oo ka tirsan Hay’adaha Dowladda Somaliland, kuwaas oo uu ka gaabsaday inuu magac-dhabo inta aysan soo gaba-gabeyn baaritaanka ay ku hayaan, oo uu sheegay in ay dhawaan soo doonaan jatiijada ay kala kulmaan. Waxa uu xusay in baaritaankaas uu qeyb ka yahay shaqo ay kula dagaalamayaan musuqa Somaliland, taas oo uu sheegay in ay soo bilaabeen sanadkii tagay.
“Waxaan uga digeynaa cid kasta oo hanti qaran gacanta ku haysa in markasta lagula xisaabtami doono hantidaas qaranka ee ay gacanta ku hayaan” ayuu yiri Axmed Dirir, oo warbaahinta kula hadlayey magaalada Hargeysa, kuna goodiyey in aysan ka waaban doonin dacwo kusoo oogidda kuwa musuqa ku lugta leh. Waxa uu sheegay in baaritaanno ay soo wadeen ilaa sanadkii hore ay ku heleen kiisas aad u fara badan oo, sida uu sheegay, lagu dhacay hanti ay Somaliland leedahay.
“Gobolka Maroodi Jeex, shirkaddii Leysimada (Baabuurta) gacanta ku haysay ee gaarka loo lahaa dambi baa lagu helay” ayuu yiri Hanti-dhawraha Somaliland, Axmed Dirir. Waxa uu sheegay in ay shirkaddaas, oo gaar loo leeyahay, hase ahaatee ay Somaliland siisay mashruuca leysin bixinta, ay ku qabteen u bixinta leysimada sifi aan sharci ahayn. “Ilaa 2360 Leysin baanu gacanta kusoo dhignay, illaa laba eedeysanana gacanta waa lagu hayaa” ayuu yiri Hanti-dhawruhu.
Axmed Dirir waxa uu sheegay in musuq baaristaas ay ka sameeyeen gobolada iyo magaalooyinka Somaliland oo dhan. Boorama iyo Gibiley ayuu sheegay in ay dad ku heleen dambiga ay baarayeen. “Boorama ilaa saddex qof ayaa dambi lagu helay, oon Xeer Illaalinta u gudbinay” ayuu yiri Dirir. “Gobolka Gibiley, oo kale, waxaa jira dadaan Xeer Illaalinta u gudbinay, oo uu xakun ku dhacay oo iyagana lagu helay dambi musuq-maasuq” ayuu hadalkiisa ku daray.
Waxa uu sheegay in uu xafiiskiisu xitaa sameeyey inuu dib uga soo celiyo hanta, ay dowladda Somaliland leedahay, shaqaalo maamulka ka tirsan. Waxaase uu intaa raaciyey inuu Xafiiska Hanti-dhawrku bilaabay inuu wacyi-geliyo shaqaalaha dowladda. “Waxaan sameynay maamul toosin, waayoo qofka aan waligiiba marnaba la siin maamul toosin waa inaad siisaa tilmaamaha uu raacayo iyo habka uu u shaqeynayo, dabeetana aad kula xisaabtanto marka dambe” ayuu yiri Hanti-dhawraha Somaliland, Axmed Yuusuf Dirir.
Xildhibaan ku eedeeyey DP World iney ku guuldareysatay balaarinta Dekedda Berbera